पोखरामा जारी सडक महोत्सवमा ५० करोडको कारोबार हुने आयोजकको अपेक्षा ! – ebaglung.com
पोखरामा जारी सडक महोत्सवमा ५० करोडको कारोबार हुने आयोजकको अपेक्षा !
२०७४ पुष १४, शुक्रबार २१:०३	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
कविता घर्तीमगर, पोखरा २०७४ पुस १४ । सडकमै खाऔ, सकडमै नाचौ, सडकमै रमाऔ भन्ने नारा सहित पोखरामा हिँजो देखी सुरु भएको १९ औ सडक महोत्सवमा ५० करोडको कारोबार हुने आयोजको अपेक्षा छ ।
रेवान पोखराको आयोजनामा सञ्चालन भएको उक्त महत्सव पोखरा लेकसाईड स्थित फिस्टेल गेट देखि डिहिकोपाटन सम्मको करिब ३ किलोमिटर खुल्ला सडकमा संचालन भएको छ । आज पहिलो दिनमा विभिन्न झाँकीमा दर्शकको उत्साहजनक उपस्थिती रहेको थियो । महोत्सवलाई लक्षित गरि लेकसाईड क्षेत्रलाई दुलही झै सिगारिएको छ । १७ गते सम्म संचालन हुने महोत्सव स्थलको विवाह घर जस्तै रङगीचङगी भएको छ । महोत्सव संचालन हुने दायाँबाँयाका सडकहरुमा रङगरोगन गरिएको छ भने रङगीचङगी धोजा पताकाले टागेर सिंगारिएको छ ।
अग्रेजी नयाँ वर्षको स्वागतका लागि आयोजना गरीएको महोत्सवको मुख्य स्थल कोमागाने पार्कमा स्टेज र विभिन्न खाने कुरा, लत्ताकपडा, बाल उद्यान महोत्सवको आक्रषण रहेको छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा यो मौसमलाई अफसिजनको रुपमा लिइने भएकाले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षण गर्न महोत्सव आयोजना गरिएको आयोज गरेको रेवान पोखराका अध्यक्ष चौबहादुर गुरुङले बताए । पाँचदिने सडक महोत्सवमा महोत्सवमा जापान, चीन, दक्षिण कोरिया र भारतका साँस्कृतिक कार्यक्रमका साथ सातवटै प्रदेशका सास्कृतीक समुहले सास्कृतक नृत्य प्रस्तुती.रहने छ ।
प्रदेश नम्बर–१ बाट सतार जातिको साँस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदेश–२ बाट मैथली कार्यक्रम, प्रदेश–३ बाट नेवार जातिको, ४ बाट गुरुङ, ५ बाट बर्दियाको थारु जाति, ६ बाट हुम्लाको हुम्लेली जातिको र ७ बाट डडेल्धुराको देउडा जातिको साँस्कृतिक कार्यक्रम एकै स्थानमा हेर्न पाइने आयोजकले बताएका छन् ।
त्यसै गरी छिमेकी ६ जिल्लाबाट उत्पादित सुन्तला तथा कृषिजन्य पदार्थको प्रदर्शनी,सडकमै राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्िष्ट्रय खानाका परिकार, विभिन्न मनोरन्जनात्मक कार्यक्रम, पर्यटन, खेलकुद, हस्तकला प्रदर्शनी, बालउद्यान, साहसिक पर्यटक खेलकुद वृत्तचित्र प्रदर्शनी, लोकदोहोरी, लाइभ कन्सर्टलगायत कार्यक्रम हुनेछन् । सडक महोत्सवबाट पोखराका होटल तथा महोत्सवस्थलमा गरी झन्डै ५० करोड रुपैयाँ कारोबार हुने आयोजकको अनुमान छ ।
रुद्रवेणी वामी टक्सार सडक खण्ड निर्माण क्रममै कमजोर – ढकाल
गल्कोटमा भित्रिने रेमिट्यान्सको सहि ठाउमा प्रयोग हुन सकेन : एनआरएन अध्यक्ष भट्ट